Downloads 49 575
Created 02-03-2010 18: 19: 22
Akachinja 06-06-2012 19: 04: 54
Munyori: Model naRobert Versluys, Panel kubudikidza Pasquale Rinaldi, zvinoita kubudikidza Cadmus Lee
Download KwaFSX & Steam Edition #Native FSX uye / kana P3D #2D Panel chete
Heano ichangoburwa akaberekwa Air France, Airbus A380! A vaitire chaiye kudzinga uye vanakidzwe avimbiswa, zvinosanganisira tsika mitinhimira uye remadziro yakananga 2D womuenzaniso. Yambiro hapana rakapotsa Cockpit, kana kutanga, zvakarurama tinya chidzitiro uye sarudza 2D Cockpit maonero.
- On October 30, 2009, Air France-KLM akagashira yaro yokutanga Airbus A380
- On November 20, 2009, kambani wakaita musikana kutiza A380 pakati Paris uye New York pamwe 538 vatakurwi mungarava.
Air France ari kutora hurukuro yayo yokutanga Airbus A380, pakukura airliner munyika, izvo zvinogona kutakura 538 vatakurwi pamusoro 13,000? Km. Vatatu gumi ndege iri kuitira achaiswa Air France pakati zvino uye muchirimo 2010, kuti akanyatsotevera ne wechina. Kutanga musi 23 November 2009, the Air France A380 chichange kuvhiyiwa Flights zuva pakati Paris - Charles de Gaulle uye New York - JFK, ichiteverwa Paris-Johannesburg munguva yechando 2009-2010.
naizvozvo Air France ndiye wokutanga akaendesa European kuti ishande Superjumbo ichi, uye wokutanga kambani yose kupa transatlantic Flights pakati Europe uye USA pamwe ndege iyi.
The A380 kuchinyanya chakanakira nzira yose Air France, uye kukura kwayo yakanakira kumirisana vakuru vekambani yendege kuti simba nomusimboti pana Paris - Charles de Gaulle.
Its zvina mamiriro-of-the-nounyanzvi GP 7200 michini, ayo aerodynamic chimiro uye fuselage kwayo kusanganisa achangobuda ruzivo kuti A380 kupfuura zvakatipoteredza-ushamwari ndege yayo muchikwata.
«In 1996, Air France kwakavakirwa chisarudzo chacho kuwana A380 chinangwa zvinodiwa izvo zvakaratidza kuti chokupika ndege iyi yakanga Zvakanakisa wakanyatsokodzera zvinodiwa Company wacho», vakazivisa Jean-Cyril Spinetta, sachigaro revatungamiriri pamusoro Air France-KLM .
The A380 Anozvirumbidza yakaenzana dzokuita kuti mumwe Boeing 777-200 uye Airbus A340-300 zvabatanidzwa apo chipiriso 20% zvinoderedza kushandiswa mari.
«A380 nechimwe zvichabatsira Air France kuponesa 12 kuti 15 miriyoni euros pagore, iyo, ano mwoyo zvoupfumi okunze, kunopa Company pamwe zvinoreva kutsungirira dambudziko. Naizvozvo Air France vachakwanisa kupa vatengi ayo nyaradzo yakatokura, apo nokuramba kwayo mari pasi masimba. Uyezve, mabasa ose A380 riri mumutsara pamwe Company wacho kwezvakatipoteredza wazvipira », akawedzera Pierre-Henri Gourgeon, CEO pamusoro Air France.
Air romuFrance A380 anopa vatakurwi nemakirasi matatu: La kuratidzwa-First - 9 nezvigaro huru nechepamusoro - Affaires-Business - 80 nezvigaro yokumusoro nechepamusoro - uye Voyageur-Economy 449 zvigaro ndokuwarira pamusoro shop maviri. In chimwe nechimwe zvinoshamisa akanyarara kabhini, Air France akasika rakapfava kuchizorodza ambience, akavonga chinjika chiedza wakanyatsokodzera dzakasiyana nzendo kutiza. Angava musangano pfungwa kana kutandara nzvimbo, mumwe kabhini yave kurongedzerwa zvose mubhazi vanofanira kuita ravo kutiza chiitiko inofadza zvechokwadi chete. 22 ndege vashandi vari mungarava kushumira 538 vatengi.
Kare 1996, Air France akatora chikamu kushanda mumapoka kusanganisira Airbus uye chikuru kanda vatakuri A380, kugadzira chinhu ndege iyo aigona kusangana mutengi tarisiro, uye vakagadzirira kwaro kubva 2003. Air France ave vakamboshanda yendege zviremera kuchinja pasi zvivako kuti ndege itsva iyi, yakadzidziswa zvose vashandi uye pasi tsvimbo uye paakapiwa mune murwere michina rakakodzera.
Airbus A380 Air France FSX Download
Downloads: 49 512
Downloads: 561 499
Downloads: 28 607
Downloads: 258 197
Downloads: 71 874
Downloads: 23 193
Downloads: 57 956